About Us - Shijiazhuang Pengtong Dhimoni Duku & Exp Co., Ltd.
Cotton & jira spandex
Home Whitehead Textile jira
Pocketing & Lining jira
Polyester zvinhu zvenaironi jira
TR suit jira
Mutsvuku zvemachira jira
Shijiazhuang PengTong Dhimoni Duku. & Exp. Co., Ltd. ---- ndiyo misoro yokumwe unobereka & wokutengesera vachida. The kambani nhema Shijiazhuang pakati Hebei munyika Whitehead Textile chawo, inova imwe makurusa Whitehead Textile nezvigadziko mu China. Pane 400 kurukiswa muchina uye kuramba värjäys & muchina rakadhindwa muna kambani. Tinogona kuitawo metres vanopfuura mamiriyoni 100 ingrey zvinhu uye värjäys anopfuura mamiriyoni 200 micheka ose gore.
We kupa siyana rejira kugadzirwa kuti zvinodiwa mutengi yedu panguva iyoyo. Hwatine kugadzirwa ari pocketing ----- donje, T / C, T / R, pane pachena, twill, herringbone. Ivo vanotengeswa mudzimba kumusika uye aivigirwa kunyika dzinopfuura makumi maviri uye nzvimbo dzakaita US, kong, Southeast Asia, Middle East uye Europe.
Tinogara kuunza zvitsva pfungwa mujinga pasi unhu hwakanaka anobuda uye ane mukurumbira wakanaka kubva mutengi.
Tichatevera nguva dzose kuchiripo mutemo "Best Quality, Netsika Credit, Zvainyanya Service uye nomwoyo wose Cooperation" kupa vomuzana kirasi basa makasitoma zvose. Zvichakadai, isu tichati kuramba kusimbisa kugona kwedu mudzimba uye dzakawanda misika maererano nani zvinogadzirwa yepamusoro uye basa.
PengTong ari kutarisira kuva pamwe nemwi ramangwana.
We akagadza akakwana Kwevadzidzi uye kugadzirwa aibuda, kukura dhipatimendi, mutevedzeri dhipatimendi, QC dhipatimendi, Finance dhipatimendi.
tichikurukura vatengi: H & M Gap Zara ELAND yaRevhi Basic HOUSE Tommy
Industry, vagotengeseranamo kusangana
Tine fekitari kwedu, saka tinogona kuderedza mari uye kudzoka Purofiti shure kune vatengi, panguva ino, tinogona kupa mabasa ounyanzvi.
Kana paine unhu matambudziko pashure saleing, isu acharonga chinokosha munhu pakugadzirisa dambudziko nekukurumidza
simba zvibereko kudzivirirwa
Tine mhando dzose chomuruki kuenda apa 400 rinovira, unogona kugadzira mamiriyoni 14 metres rejira pagore
Pakazosvika zvivako zviri Tianjin chengarava uye Qingdao chengarava, tinogona kupa basa "The uchitsanya pakukurukura nguva, yokutanga nguva pakukurukura".
Wedzerai: RM # 1201, Ximeiwuzhou Plaza, Huaian East Road, Yuhua District, Shijiazhuang, Hebei, China
Yarn Dyed Brushed Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Chambray Fabric, Tc 65/35 32*32 106*58 Plain Fabric, Yarn Dyed Check Fabrics, Tc rwebhuruu akazodzwa Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Woven Fabric,